IMEI Backup/Restore (QCN Backup/Restore) for Mi Max – Xiaomi Guide
IMEI Backup/Restore (QCN Backup/Restore) for Mi Max
Published January 15, 2017 by Thet Zaw Ko
IMEI information တွေကို Backup လုပ်ထားမယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုန်းလိုင်းမတက်၊ လိုင်းပျောက်တွေဖြစ်ရင် ပြန်ထည့်မယ့် နည်းလမ်းပါ။ Mi Max လို့ဆိုတာက Mi Max နဲ့နမူနာပြထားလို့ပါ။ Qualcomm CPU ကို သုံးထားတဲ့ မည့်သည့် xiaomi phones တွေကိုမဆို သည်နည်းနဲ့ Backup ယူူထားနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ချိန် Restore လုပ်ပြိး ပြန်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ QCN Backup လုပ်တယ်လဲ ပြောကြပါတယ်။ သည် post မှာတော့ ကိုယ့်ဖုန်းက IMEI info တွေကို Backup ယူထားမယ်၊ ကိုယ့်ဖုန်းမှာပဲပြန်ထည့်မယ် ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကို ပြောပြမှာပါ။ Model တူတဲ့ အခြားဖုန်းက QCN backup ယူလာပြီး ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ကိုယ့် IEMI နံပါတ်တွေပြင်ထည့်ပြီး Restore ပြန်လုပ်တာကိုတော့ နောက်ထပ် post တစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။
IMEI, Baseband ပျောက်ရင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ Fastboot rom ကိုပဲ ပြန်တင်ပေးပါ။ အဲသည်မှာ Modem file ကို ပြန် flash ပါတယ်။ အဲသည် အဆင့်မှာလည်း အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။ မရရင်တော့ အခုလို backup လုပ်ထားတဲ့ QCN file ကိုပြန်ထည့်ပေးပြီးလုပ်ယူရမှာပေါ့ခင်ဗျာ..။ MTK CPU သုံးဖုန်းတွေကတော့ ခုလိုသီးသန့် သိမ်းထားစရာမလိုပါ။ သူတို့ရဲ့ Fastboot firmware ထဲမှာပါတဲ့ Modem file ကိုသုံးပြီး IMEI တွေကို MTK Meta Mode ကနေပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာ [ >> IMEI & MEID Fix for Redmi Note 4, Redmi Pro << ] MTK CPU သုံးတဲ့ Redmi Note 4, Redmi Pro တို့ကို IMEI ပြန်ရေးသားနည်းကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကဲ… စလိုက်ကြရအောင်…။ လိုအပ်တာတွေကတော့…
Backup လုပ်ရန်အတွက် ROOT လိုချင်လည်းလိုပါမယ်။ မလိုချင်လည်း မလိုပါ။ ဖုန်း Model ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Restore ပြန်လုပ်ဖို့ အတွက်ကတော့ Boot Loader Unlock လုပ်ထားပြီး၊ ROOT ထားပြီးသား ဖြစ်နေရပါမယ်။ သည်နေရာမှာ အခုလိုအပ်ချက်အတွက် အကြမ်းဖျဉ်းမှတ်နိုင်တာက *#*#717717#*#* နဲ့ Diag Mode ကို ဝင်နိုင်တယ်၊ ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဖုန်း Model တွေမှာ QCN Backup အလွယ်ယူနိုင်တယ်၊ QCN Backup file ကို အလွယ်ပြန် Restore ပေးနိုင်ပါတယ်။ Restore ချိန် BLU, Root လိုတယ်ဆိုတာကတော့ Restore လုပ်တဲ့အခါ clean ဖြစ်အောင် EFS Partition ကို root access ကနေရှင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး QCN ပြန်ထည့်ရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေတတ်တာမို့ လိုအပ်တယ်ဆိုထားတာပါ။ BLU, Root မလိုပဲ သည်တိုင်း Diag Mode ဖွင့်ပြိး QCN ပြန်ရေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ သည်တော့ Restore ဖို့ BLU, Root လိုတာဆိုတာ မဖြစ်မနေတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ Diag mode ကို keys နဲ့ဝင်နိုင်ရင် QCN သည်တိုင်းပြန်ထည့်မယ်။ အဆင်မပြေရင်တော့ BLU, Root access ထဲကမှပဲ EFS ကို clean ပြီးမှပြန်ထည့်မယ်ပေါ့။
Qualcomm ကထုတ်တဲ့ QPST Software လိုပါမယ်။ အောက်ပါ link ကနေ download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာမှာ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Adb, Fastboot, Qualcomm drivers တွေ တင်ထားပြီးသား၊ အလုပ်လုပ်နေပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။ Xiaomi phone တွေအတွက် PC Drivers တင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ Drivers တွေကို သည်နေရာမှာ [ >> PC Driver Installation for Xiaomi Phones << ] လေ့လာပြီး လိုအပ်တာတွေကို download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Boot Loader Locked ဖုန်းတွေကို firmware တင်ရင် Qualcomm ရဲ့ EDL (Emergency Download Mode) ကိုဝင်ပြီး ရေးတယ်ဆိုတာ မှတ်မိမှာပါ။ သည်နေရာမှာလည်း IMEI information တွေဖတ်ဖို့ Qualcomm ရဲ့ USB Diagnostics Mode ကို ဝင်ပြီး ဖတ်တာ၊ ရေးတာ လုပ်ရပါမယ်။ Diagnostic Mode ဝင်ဖို့ Phone Dialer ကိုဖွင့်ပြီး *#*#717717#*#* ကိုနှိပ်ပါ။ Diag USB Port Enable ဆိုတဲ့ Toast Noti လေးပေါ်လာပါမယ်။ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ USB cable သုံးလို့ချိတ်ဆက်ပါ။ Driver တွေ install လုပ်ဖို့လိုရင် auto install လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးပြီးရင်တော့ Computer’s Device Manager မှာ Qualcomm Diagnostics Port တစ်ခုတွေ့မှာပါ။ COM port number လေးပါ မှတ်ထားလိုက်ပါ။
*#*#717717#*#* MMI Code နဲ့ Diag Mode ဝင်မရတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ root access လိုပါပြီ။ ဖုန်းကို USB cable နဲ့ကွန်ပျူတာကို ဆက်ထားပြီး အောက်ပုံပါအတိုင်း command များရိုက်ပြီး Diag Mode ကို ON ပါ။
USB Diag Port တစ်ခု computer’s Device Manger မှာပေါ်လာပါပြီ။ code နဲ့ဖွင့်တာနဲ့ port number လေးတွေ မတူတာ သတိထားမိမှာပါ။
ပြီးရင်တော့ computer မှာ install ထားတဲ့ QPSTConfig.exe ဆိုတဲ့ program ကိုဖွင့်ပါ။
QPST Program ပွင့်လာရင် Active ဖြစ်နေတဲ့ ဖုန်းတစ်ခုကို Detect သိနေပြီး Port number ကိုပါပြနေမှာပါ။
Start Client menu မှ Software Download ဆိုတာကိုရွေးပါ။
QPST Software Download Windows ပေါ်လာပါက Backup Tab ကိုရွေးပါ။ QCN file ကို သိမ်းထားမယ့်နေရာ၊ နာမည်တွေပေးဖို့ Browse Buttonကိုနှိပ်ပါ။
Computer မှာ file သိမ်းချင်တဲ့ location ကိုရွေးပါ။ file နာမည်ပေးပါ။ သိမ်းထားမယ့် File Type နေရာမှာ (*.qcn) ကိုရွေးပါ။ Save button ကိုနှိပ်ပါ။
ပြင်ဆင်ပေးတာတွေအားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်လို့ backup ကူးရန် Start Button နှိပ်ပါ။
Backup ကူးတာ ပြီးဆုံးပါပြီ။
Computer ထဲမှာ QCN file လေးတစ်ခုရလာပါပြီ။
Phone ကို USB Diag mode မှပြန်ထွက်ရန် *#*#717717#*#* MMI code ကိုပြန်နှိပ်ပါ။ USB Diag mode မှပြန်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
MMI code နဲ့ Diag mode ဝင်မရလို့ Root access နဲ့ ဝင်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေကတော့ အောက်ပုံပါ command ကိုရိုက်ပြီး USB Diag Mode မှပြန် ထွက်နိုင်ပါတယ်။
IEMI, Baseband ပျောက်နေတာကို ပြန် Restore လုပ်တာကတော့ ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် QCN file ကို QPST Software သုံးပြီး ပြန်ထည့်ပေးတာပါ။ Dial Pad ကနေပဲ *#*#717717#*#* နဲ့ Diag Mode ဝင်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေမှာ ဝင်ပြီး QCN Backup file ကို ပြန်ထည့်ကြည့်ပါ။ အဲသည်နေရာမှာအဆင်ပြေသွားရင် OK ပေါ့။ အဲသည်နေရာမှာ အဆင်မပြေရင်၊ Diag Mode ကို *#*#717717#*#* နဲ့ဝင်လို့မရတဲ့ဖုန်း model ဖြစ်ရင်.. တွေအတွက်ကတော့ Root Access လိုပါမယ်။ Root Access က Diag Mode ဝင်ဖို့ရယ်၊ EFS Partition ကို Clear လုပ်ပြီးမှ QCN file ကို ပြန်ရေးဖို့ရယ်အတွက်ပါ။
*#*#717717#*#* နဲ့ Diag Mode ဝင်လို့ရပြီး Root access မရှိသူတွေက အောက်ပါအဆင့်တွေကိုကျော်ပြီး QPST Software နဲ့ QCN file restore တာကို စလုပ်ပါ။ အဆင်မပြေရင်တော့ Root ရအောင်ကြံစည်လုပ်ဆောင်ပြီးမှ အောက်ပါအဆင့်တွေအတိုင်း ဆက်လုပ်ပါ။
IMEI, Baseband ပျောက်တာတွေ ပြန် Restore လုပ်ဖို့ ဖုန်းမှာ corrupt (ပျက်စီး) နေတဲ့ modemst1, modemst2, fsg partitions တွေကို wipe (ရှင်းထုတ်) ပစ်ရပါမယ်။ သည်နေရာမှာ Root Access လိုပါတယ်။ ADB Shell Windows ကနေပဲ wipe လုပ်ရပါမယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး block numbers တွေမတူတဲ့ အတွက် modemst1, modemst2, fsg တို့ရဲ့ block numbers တွေကို အောက်ပါပုံက command နဲ့ကြည့်ပြီးမှတ်သားထားပါ။
Mi Max Prime အတွက် fsg, modemst1, modemst2 တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ block numbers တွေကတော့ /dev/block/mmcblk0p40, /dev/block/mmcblk0p41, /dev/block/mmcblk0p42 တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဖုန်းတွေမှာအတွက်လည်း fsb, modemst1, modemst2 တို့အတွက် block number ရှာပြီးမှတ်ထားပါ။
fsg, modemst1, modemst2 partitions တွေကို အောက်ပုံပါအတိုင်း command တွေသုံးပြီး wipe ပါမယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပါမယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဖုန်းအကောင်းကို ဖျက်ပြီး နမူနာလုပ်ပြနေတာမို့ အခုအချိန်မှာ ဖုန်းက လိုင်းမမိ No SIM ဖြစ်၊ Baseband Unknown ဖြစ်နေပါပြီ။
ကဲ.. ကျနော်တို့ backup သိမ်းထားခဲ့တဲ့ QCN File ကို QPST Software သုံးပြီး ပြန် Restore လုပ်ရအောင်။ ဖုန်းကို Diag Mode ဝင်မယ်။ ( *#*#717717#*#* နဲ့ Diag Mode ဝင်မရတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်က adb mode ကနေဝင်ပါမယ်။)
QPST Program ပွင့်လာရင် Start Clients menu ကနေ Software Download ဆိုတာကိုရွေးမယ်။
သည်တစ်ခါမှတော့ ကိုယ့်မှာသိမ်းထားတဲ့ QCN file ကိုပြန်ထည့်ပေးမှာမို့ Restore Tab ကိုရွေးပါမယ်။
Browse Button နှိပ်ပြိး ကွန်ပျူတာမှာသိမ်းထားတဲ့ QCN File ကိုရှာပေးဖို့လုပ်ပါမယ်။
File Type နေရာမှာ (*.qcn) ဆိုတာကိုရွေးပေးပါမယ်။
ကွန်ပျူတာထဲသိမ်းထားတဲ့ QCN File ကိုရွေးပေးပြီး Open လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြင်ဆင်တာတွေအားလုံးပြိးလို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲကို QCN file ပြန်ရေးပေးဖို့အတွက် Start Button နှိပ်ပါ။
QCN File ကို Restore လုပ်နေပါမယ်။
100% ပြည့်ပြီး အားလုံးပြီးဆုံးသွားရင်တော့ Memory Restore Completed. ဆိုတဲ့ Message လေးတွေ့ရပါပြီ။ Program ကိုပြန်ထွက်နိုင်ပါပြီ။ ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းပြန်တက်လာချိန်မှာတော့ Baseband အမှန်ပြန်ဖြစ်၊ IMEI တွေအမှန်ပြန်ပေါ်၊ ဖုန်းလိုင်းတက်လာတာတွေ့ရမှာပါ…..။
Phone ကို MMI code နဲ့ပဲ Diag mode ဝင်လို့ရတယ်…. Root Access လည်း မရှိသေးဘူးဆိုရင် fsg, modemst1, modemst2 blocks တွေကို wipe လုပ်မပစ်ပဲ Restore အရင်လုပ်ကြည့်ပေါ့။ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ Wipe လုပ်နိုင်ဖို့ Root Access ရအောင် ကြိုးစားပါ။ IMEI တွေပျောက်နေလို့ Mi Account sign in မဝင်နိုင်ပေမယ့် Boot Loader Lock ဖုန်းတွေမှာ Unofficial Boot Loader Unlock files တွေ flash ပြီး TWRP သွင်းလို့ Root နိုင်ပါတယ်။ Boot Loader Lock မပါတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ TWRP ဘယ်လိုသွင်းသွင်း အဆင်ပြေမှာပါ။